Don’t Breathe (2016) | MM Movie Store
နာမညျကွီး လူကွိုကျမြားနတေဲ့ Horror တဈကားကို တငျပေးလိုကျပါတယျ။ Evil Dead ကို ဖနျတီးခဲ့သူ Fede Alvarez ရဲ့ အကောငျးဆုံးလကျရာတဈခုပါပဲ။
အိမျလေးတဈလုံးထဲမှာ သရုပျဆောငျလေး ၄-၅ ယောကျကိုပဲ အားပွုပွီး တငျဆကျသှားတာပါ။ ဒါပမေယျ့ ဇာတျလမျး၊ မထငျမှတျတဲ့လှညျ့ကှကျတှေ၊ သရုပျဆောငျ၊ အသံပိုငျးတှမှော ပွောစရာမရှိအောငျ ကောငျးမှနျလှနျးတဲ့အတှကျ ဒီလို အောငျမွငျသှားတာပဲ ဖွဈမယျထငျပါတယျ။ လကျရှိတော့ IMDb 7.1 နဲ့ ရပျတညျနပေါတယျ။
ဇာတျလမျးအကဉျြးလေးကတော့ တဈယောကျတညျးနတေဲ့ စဈပွနျ မကျြမမွငျအဘိုးကွီးတဈယောကျရဲ့အိမျကို ဖောကျထှငျးဝငျရောကျတဲ့ ဆယျကြျောသကျလေး ၃ ယောကျရဲ့အကွောငျးပါ။ အလှယျဆုံးဖောကျထှငျးမှုလို့ ထငျပွီး ဝငျရောကျသှားခဲ့ပမေယျ့ မကျြမမွငျအဘိုးကွီးဟာ သူတို့ထငျသလို အဆိပျမရှိတဲ့ ရမွှေမေဟုတျတဲ့အခါ……
တံခါးတှေ အားလုံးပိတျ မီးအမှောငျခပြွီး အကုနျလုံးကို သတျပဈဖို့ ကွိုးစားလာတဲ့အခါ…. အသကျမရှုလိုကျနဲ့ ဆိုတဲ့ ဇာတျကားရဲ့ နာမညျအတိုငျး အသကျရှုသံ တဈခကျြ ခွသေံတဈခကျြက သခွေငျးရှငျခွငျးကို အဆုံးအဖွတျပေးလာပွီဆိုရငျ……
နာမည်ကြီး လူကြိုက်များနေတဲ့ Horror တစ်ကားကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Evil Dead ကို ဖန်တီးခဲ့သူ Fede Alvarez ရဲ့ အကောင်းဆုံးလက်ရာတစ်ခုပါပဲ။
အိမ်လေးတစ်လုံးထဲမှာ သရုပ်ဆောင်လေး ၄-၅ ယောက်ကိုပဲ အားပြုပြီး တင်ဆက်သွားတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဇာတ်လမ်း၊ မထင်မှတ်တဲ့လှည့်ကွက်တွေ၊ သရုပ်ဆောင်၊ အသံပိုင်းတွေမှာ ပြောစရာမရှိအောင် ကောင်းမွန်လွန်းတဲ့အတွက် ဒီလို အောင်မြင်သွားတာပဲ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ လက်ရှိတော့ IMDb 7.1 နဲ့ ရပ်တည်နေပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ တစ်ယောက်တည်းနေတဲ့ စစ်ပြန် မျက်မမြင်အဘိုးကြီးတစ်ယောက်ရဲ့အိမ်ကို ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်လေး ၃ ယောက်ရဲ့အကြောင်းပါ။ အလွယ်ဆုံးဖောက်ထွင်းမှုလို့ ထင်ပြီး ဝင်ရောက်သွားခဲ့ပေမယ့် မျက်မမြင်အဘိုးကြီးဟာ သူတို့ထင်သလို အဆိပ်မရှိတဲ့ ရေမြွေမဟုတ်တဲ့အခါ……
တံခါးတွေ အားလုံးပိတ် မီးအမှောင်ချပြီး အကုန်လုံးကို သတ်ပစ်ဖို့ ကြိုးစားလာတဲ့အခါ…. အသက်မရှုလိုက်နဲ့ ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားရဲ့ နာမည်အတိုင်း အသက်ရှုသံ တစ်ချက် ခြေသံတစ်ချက်က သေခြင်းရှင်ခြင်းကို အဆုံးအဖြတ်ပေးလာပြီဆိုရင်……
9-1-1 (Season 3) ၊ အပိုငျး (၉)